आतंकवादको भत्र्सना – NepalayaNews.com
८ मंसिर २०७२, मंगलवार १५:०७
पेरिसमा भएको आतंकवादी आक्रमणको सर्वत्र निन्दा भएको सुनिन्छ, तर त्यसको गुह्य बुझेर पाठ सिक्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिन्न । आम सर्वसाधारणलाई लक्ष्य गरेर गोली र वम वर्षाउने कामको निन्दा त जो कसैले गर्न सक्छ । जो मारिए, निरपराध मान्छेहरु मारिए भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । हुन सक्छ आतंकवादीले त्यहाँ फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रास्वाँ होलान्डेलाई नै लक्ष्य गरेका थिए, तर उनीहरु असफल भए । तर, २ सयभन्दा बढी निर्दोष मान्छेहरुको अनाहकमा ज्यान गयो ।
बेल्जियममा बसेर बुनिएको योजनाअनुसार पेरिस आक्रमण भएको भनिएको छ । तर, यसको जिम्मेवारी आक्रमणकै दिन………आइएसले लिएको थियो । इस्लामिक स्टेट अर्थात आइएसले पश्चिमा मुलुकहरुविरुद्ध जेहाड छाड्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसकै फलस्वरुप २ वर्षमात्रै पुरानो यो संगठनले पेरिस हमला गरेर विश्वकै ध्यानाकृष्ट ग¥यो । शान्तिकामीहरुलाई दच्कायो ।
आइएसकै भनाइ मान्ने हो भने अमेरिकालाई साथ दिएकोमा फ्रान्समा हमला गरेको भनिएको छ । एक्लै विश्व हाँकिरहेको अमेरिकाले बेलायत र फ्रान्सजस्ता राष्ट्रहरुको साथ र समर्थन पाएरै विश्वको नेतृत्व गरिरहेको छ । हो यो सत्य हो । अमेरिकाको नजर मुसलमान देशहरुमाथि बढी गढेको छ र त्यस मामलामा अमेरिका बढी चासाखाँचो राखिरहन्छ । त्यही भएर मुसलमान समुदाय अमेरिकाप्रति असन्तुष्ट भन्ने आलोचकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
हामी अमेरिकामा बसिरहेकाहरुले पनि पेरिस आक्रमणको निन्दा ग¥यौं । यसअघि हाम्रै यो कर्मभूमि अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ट्विन टावरमाथिको आक्रमणको निन्दा ग¥यौं । तर, एकपटक सोचौं त अमेरिका सर्व शक्तिमान भएकैले मात्रै निशाना बनिरहेको हो कि यो हाम्रो प्यारो मुलुकको पनि कहीं न कहीं गल्ती कमजोरी छन् ? आलोचकहरुले भनेजस्तै मुसलमान समुदायमाथिको बढ्ता चासो र दख्खल यो हाम्रो मुलुकको पनि कमजोरी त होइन ?
यसअघिका राष्ट्रपति जर्ज बुसले इराकमाथि हमला गर्नु र त्यहाँ राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई फाँसीको फन्दासम्म पु¥याउनु के जायज थियो ? थिएन भन्ने कुरा त स्वयं बुसले अहिले आएर स्वीकारिसकेका छन् । अफगानिस्तानमा वर्षाैं वर्षदेखि अमेरिकी सेना खटाउनु के हाम्रो यो मुलुकको सरकारले गर्नैपर्ने काम हो ? हामीले तिरेको करबाट पालितपोषित सेनालाई त्यहाँसम्म किन खटाउनुपरेको हो ? किन तालिवानविरुद्ध लडाइ लड्न पठाउनु परेको हो ? हामीसँग किन इरान लगायत मुलुक जोरी खोजिरहन्छन् ? हामीलाई किन भेनेजुयलाले कुइनो जुधाउन खोज्छ ? रुस किन औंला ठड्याउँछ ? सिरियाको गृहयुद्धमा हामीलाई किन यतिविधि निधिखुदी चाहिएको ?
यी सबको उत्तर अमेरिका शक्तिशाली भएर अझै बन्न चाहेर मात्रै होइन । अमेरिकाले जहाँकहिं प्रजातन्त्र होस् र मानवअधिकारको रक्षा होस् भन्ने चाहेको छ । धार्मिक अन्धता र जडतामा रुमलिएका मुलुकका जनताको पनि हित चिताएको छ । त्यसैले धर्मानन्दहरुले अमेरिकालाई तारो बनाइरहन्छ । अमेरिकालाई साथ र समर्थन दिनेहरुलाई पनि पीडा दिन्छन् । पेरिस आक्रमण त्यसैको उपज सिवाय केही होइन । अझ पेरिसमा भएको हमला त्यो ठाउँमा पनि भयो, जहाँ चर्चित अमेरिकी सांगीतिक समूहले प्रस्तुति दिइरहेको थियो । खेल मैदान र कन्सर्टमा आम मान्छे भन्ने जान्दाजान्दै गरिएको बम र गोली आक्रमण त्यसैले पनि आतंकवाद हो, किनभने यसले आमसर्वसाधारण निरपराध व्यक्तिहरुको ज्यान लियो, जसलाई घरेलु वा विश्व राजनीतिमा खास चासो थिएन । चासो थियो त केवल खेलमा र संगीतमा । अक्सर खेल र संगीत मनपराउनेहरु अन्तर्राष्ट्रयवादी हुन्छन् । ती विश्वभरिका हुन्छन् । राजनीतिक दायराको पर्खालभित्र सीमित हुन्नन् ।
विश्वमा फैलँदो आतंकवादलाई विसर्जन गर्न शान्तिको सबैले एकसाथ कदम चाल्दा उपयुक्त हुन्छ । हामीले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट शान्तिका लागि प्रयास ग¥यौं भने विश्वभर शान्ति फैलाउने सबैको चाहना पूरा हुन असम्भव नहोला ।
ट्रम्प दम्पतीले कोरोनाको खोप जनवरीमै लगाएका थिएः पूर्व सल्लाहकार ८ मंसिर २०७२, मंगलवार १५:०७
महाभियोगबाट मुक्तिपछि ट्रम्पको पहिलो भाषण, बाइडेनले ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिलाई ‘अमेरिका लास्ट’ बनाएको आरोप ८ मंसिर २०७२, मंगलवार १५:०७
अमेरिकाले जोन्सन एन्ड जोन्सनको ४० लाख डोज खोप मङ्गलबारसम्ममा वितरण गर्ने ८ मंसिर २०७२, मंगलवार १५:०७